वेदादि शास्त्रहरूको गहन अध्ययन गर्ने उद्देश्यले जर्मनी र अमेरिका जस्ता मुलुकमा वैदिक फाउन्डेसन तथा संस्कृत भाषा अध्ययन केन्द्र खुलेका छन् । भौतिक विज्ञानको जननी मानिने क्वान्टम फिजिक्सका अध्येताहरू समेत, ‘जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य’ भन्दै वैदिक खोजमा केन्द्रित भएका छन् ।
‘कार्ल माक्र्स त्यस्ता व्यक्ति थिए, जो विद्वानका पनि विद्वान, सिद्धान्तकारका पनि सिद्धान्तकार, वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक, दार्शनिकका पनि दार्शनिक । उनले ईश्वरिय सत्तामाथि वैज्ञानिक नियमको आधारमा दार्शनिक हमला गरे । अणु परमाणु जस्ता पदार्थका ससाना ईकाईदेखि सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी जस्ता ठूला ठूला पिण्डको उत्पत्ति, विकास र विनाशको द्वन्द्वात्मक नियमको विषद् व्याख्या गरे ।’ माक्र्सवादको व्यख्याता र अनुयायीहरूको एकोहोरो रटान यस्तै हुने गर्छ । युरोपमा ईसाईपन्थलाई वर्तमान पुँजीवादी मात्रै नभई रुसी कम्युनिष्टवादीहरू पनि संरक्षण गर्न सक्रिय छन् । तथापि, युरोपियनहरुमा ईसाईयत् विरोधी चिन्तन हावी हुँदैछ । यसको कारण माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिवादको नियम चाहिँ हैन । बाईबलले धार्मिक आस्था निर्माणका जुन कारणहरु तेस्र्याएको छ; ती कारणहरू बौद्धिक जमातका लागि अपाच्य छन् ।
१५औँ शताब्दीतिर धर्मकै आडमा स्वर्गका टिकटहरू बेचिए; क्रुसेड र धार्मिक युद्धको नाममा लाखौँ निर्दाेष मानिसहरू मारिए; ‘विच हण्ट’ नामको एउटा अभियान १८औँ शताब्दीसम्म चल्योे जसमा करिब ३ लाख महिलाहरूको क्रुरतापूर्वक हत्या गरियो । यो बाईबलको आदेश थियो वा चर्चको आदेश थियो वा पाष्टरको तर यसले समाजलाई आक्रान्त बनाएको थियो । त्यसपछि, सुधारवादी समूहको नाममा ‘प्रोटेस्टेन्ट’ खडा भयो । सामाजिक कुप्रथाहरूमाथि प्रहार गरेपनि ‘शंका गर्नेहरू अनन्तको नर्कको फालिनेछन्’ भन्दै धार्मिक अन्धविश्वासभित्र मानवीय चेतनालाई कैद गरिदियो । यस्तो समुदायमा भौतिकवादी वा नास्तिकतावादी विचारले प्रभाव जमाउनु स्वभाविक थियो । विश्वमा सबैभन्दा बढी अनिश्वरवादीहरु युरोप मै छन् ।
पूर्वीय समाजमा भौतिकवादले प्रवेश त पायो तर आध्यात्मवाद विरुद्ध उभिन सकेको छैन । माओकालीन् चीनमा साँस्कृतिक क्रान्तिका नाममा हजारौँ मानिसहरु मारिए; धार्मिक स्थलहरु सखाप पारिए तर सि जिनपिङसम्म आईपुग्दा, त्यहि चीन कानुनतः बौद्ध, ताओ तथा कन्फ्युसियस धार्मिक मान्यतासँग विरोधाभाष राख्ने धार्मिक गतिविधिमाथि नियन्त्रणको प्रयास गर्दैछ । बौद्ध धार्मिक विषय पठनपाठनका लागि बौद्ध विश्वविद्यालयहरु खोल्न थालेको छ । ईसाई समूहहरूले जथाभावी खडा गरेका चर्च धमाधम ढाल्दैछ । नेपाल र भारतमा भौतिकवादी सिद्धान्तको प्रभाव कस्तो छ ? जगत छर्लङ्ग छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा उभिएर ‘कार्ल माक्र्स नै ईश्वर हुन् ।’ भन्ने अनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ काभ्रे पुगेर कुलपुजामा सहभागी हुँदै खैँजडी बजाउने । कस्तो विरोधाभास ?
पूर्वीय दर्शन बाईबल जस्तो चिन्तन हैन । झन हिन्दु तथा बौद्ध धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नेहरुका लागि भौतिकवाद वा पदार्थवाद नौलो सिद्धान्त होइन । भौतिक पदार्थलाई सार्वभौम नमानिएको मात्रै हो । पदार्थ के हो ? भन्ने सवालमा हिजाको भौतिकवादी दृष्टिकोण आज बदल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । वैदिक मान्यतामा, द्रव्य वा वस्तु वा पदार्थ भनिनका लागि तत्वमा क्रिया नभए पनि गुण चाहिँ हुनैपर्छ । यस हिसाबले पदार्थलाई मुख्यगरी दुई भागमा बाँडिएको छ–जड तथा चेतन । जड पदार्थ भनेको प्रकृति हो । चेतन पदार्थ भनेको आत्मा तथा परमात्मा । भौतिक विज्ञानले आत्मा तथा परमात्माको अस्तीत्व अस्वीकार गरेको कारण यतिखेर प्रकृतिको मात्रै कुरो गरौँ । पृथ्वी, जल, अग्नि जस्ता दृश्य तत्व मात्रै नभई वायु, तरंग, दिक्, समय तथा विद्युत आदि अदृश्य तत्व तथा तिनकै समायोजनबाट बनेका पिण्ड ग्रह तथा तारा नक्षत्रहरुलाई पदार्थको संज्ञा दिईएको छ । ‘विभाजन गर्दै जाँदा एउटा अवस्था आउँछ, जहाँनेर पदार्थ अविभाज्य तथा अदृश्य बन्न पुग्छ ।
पदार्थको त्यहि अविभाज्य तथा सुक्ष्मतम् एकाई परमाणु हो ।’ महर्षि कणादले सर्वप्रथम परमाणु सम्बन्धी यस्तो अवधारणा अघि सारे । परमाणु सम्बन्धी यस्तै धारणा भागवत पुराण स्कन्ध ३, अध्याय ११ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘पृथ्वीआदि कार्यवर्गको जुन सुक्ष्मतम् अंश छ, जसलाई विभाजित गर्न सकिँदैन र जसको अन्य परमाणुसँग संयोजन पनि भएको छैन, त्यसलाई परमाणु भनिन्छ ।’ भागवत पुराणको त्यहि स्कन्ध र त्यहि अध्यायमा अगाडि भनिएको छ, ‘दुईवटा परमाणु मिलेर एउटा अणु बन्छ । तीनवटा अणु मिलेर एउटा त्रसरेणु बन्छ । त्रसरेणुलाई हामी भ्mयालका कुनाकाप्चाबाट कोठाभित्र छिरिरहेको सूर्यको प्रकाशमा तैरिरहेका देख्न सक्छौँ ।’ परमाणुको पहिलो दृश्य रुप सम्भवतः यहि त्रसरेणु हुनुपर्छ । यहाँनेर, सवाल उठ्छ–माक्र्सवादी दर्शन अनुसार प्रलयकालको बेला परमाणु कुन अवस्थामा रहेको हुन्छ ? ऋग्वेद मण्डल १० र सुक्त संख्या १२९ (नासदिय सुक्त) मा प्रलयावस्थाको यस्तो व्याख्या छ, ‘सबैतीर गहनतम् अँध्यारो मात्रै थियो । त्यसभित्र, एक ‘स्वधया’ बाहेक अन्य कुनै पदार्थको अस्तित्व थिएन ।’ तात्पर्य के हो भने, त्यस समय परमाणुको समेत अवस्था अज्ञात रहन्छ । अगाडि भनिएको छ, ‘सर्वप्रथम, स्वधयाभित्र सृष्टि उत्पत्तिको कामना पैदा भयो ।
सृष्टिको मुलबीज यहि थियो ।’ अनि, सृष्टि आरम्भको अवस्थाबारे ऋग्वेद मण्डल १० को सुक्त १९० ले भन्छ, ‘देदिप्यमान तपबाट प्रकृति र जीव प्रकट भए । गहन अँध्यारो सृष्टि रुपमा परिणत भयो । अणु सागरमा तरंग फैलियो । अणुहरु संयोजन भएर पदार्थ निर्माण प्रारम्भ भयो ।’ ‘स्वधया’ को आधिभौतिक अर्थ ‘चेतन शक्ति’ निस्किन्छ, जो प्रलयावस्थामा पनि विद्यमान रहन्छ । सृष्टि उत्पत्तिको समयमा, यस चेतन शक्तिले गति प्रवाह गर्छ; जसलाई ईच्छा भनिएको छ । र एकबाट अनेक बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसलाई हामी अणुहरुको प्रवाहको रुपमा बुभ्mन सक्छौँ । यहाँबाट समय र आकाशको अस्तित्व सुरू हुन्छ । र, यिनै अणुहरू तरंगित भएर एक आपसमा संयोजित हुन थाल्छन् । प्रलयावस्था तथा सृष्टि आरम्भबारे माक्र्सवादी दर्शनको अवधारणा के छ ? यो चासोको विषय हो ।
वेदका मन्त्रहरूको आध्यात्मिक र आधिदैविक अर्थ पनि लाग्छ । त्यसकारण, आधिभौतिक अर्थ खोतल्दा जहाँ ‘स्वधया’ले ‘चेतन शक्ति’ को अर्थ दिएको थियो, आध्यात्मिक तथा आधिदैविक अर्थ खोतल्दा त्यहिँ ‘स्वधया’ ले ‘ईश्वर’ वा ‘ब्रह्म’ भन्ने अर्थ दिन्छ । भागवत गीता, अध्याय १५ ले यसलाई ‘ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण क्रिया गर्ने शक्ति (ईश्वर)’ को रुपमा अझ विस्तृत व्याख्या दिएको छ । यस कोणबाट हेर्दाखेरि, प्रलयावस्थामा ईश्वर बाहेक अन्य सबै पदार्थको अस्तित्व अज्ञात रहन्छ । र, ईश्वर तप (उर्जा) द्वारा दृश्य जगतको रचना आरम्भ गर्दछ । ऋग्वेदले खगोलीय पिण्डहरुलाई रज (धुलो) र तेज (उर्जा) का अनन्त पिण्ड सम्बोधन गरेको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईले, एक समारोहमा चार्वाक मत ‘यावज्जीवेत्सुखम् जिवेत्, ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम् कुतः ।’ जतिञ्जेल बाँच्छौ, सुखमा बाँच । ऋण गरेर घिउ पिउ । भश्मीभूत भएको शरीरको पुनरागम हुँदैन ।’ वाचन गरेर भौतिकवादी दर्शनको जग सनातन धर्म समाज नै रहेको अर्काे प्रमाण दिए । चार्वाक ईतिहासकै पहिलो व्यक्ति हुन्, जसले ‘ईश्वर छैन’ भन्ने घोषणा गरे । चार्वाकले वेद पढ्ने पण्डितहरु धुर्त, ठग र निशाचर हुन् भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनी आत्माको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् र केवल भौतिक पदार्थको सत्तालाई मात्रै विश्वास गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । तर, भौतिकवादी मतले जसरी युरोपियन ईसाई समाजमा छोटो समयमै लोकप्रियता हासिल ग¥यो, त्यसरी भारतवर्षीय हिन्दु समाजमा यो लोकप्रिय हुन सकेन । पुराण, बौद्धशास्त्र तथा जैनशास्त्रमा सीमित हुनपुग्यो । तथापी, कणाद र चार्वाक मतलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा, भौतिकवादी सिद्धान्तका जनक यिनै दुई जना रहेछन् भन्ने थाहा लाग्छ । तसर्थ, कम्युनिष्टवाद वा भौतिकवाद वा नास्तिकतावाद वा पदार्थवादका आदिगुरु पनि अरु कोहि नभएर यिनै दुई जना हुन् भन्ने सत्यलाई विश्वका कम्युनिष्ट विद्वानहरुले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
१२ औँ शताब्दीसम्म भारतवर्ष, विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र थियो । गणित, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, शास्त्रविद्या, दर्शन तथा भौतिक विज्ञान पढ्न चीन तथा युनानदेखिका मानिसहरु यहाँ आउने गर्दथे । १२औँ शताब्दीमा बख्तियार खिलजीको मुस्लिम फौजले, हिन्दु बौद्धको संयुक्त अध्ययन केन्द्र नालन्दामाथि आगजनी गरेपछि, परम्परादेखि चलिआएको गुरुकुल पद्दति पतन हुन सुरू भयो । विश्वभर नाम कमाएका नालन्दा, विक्रमशिला तथा तक्षशिला ईतिहासमै प्रथम सुव्यवस्थित शिक्षाकेन्द्र थिए भन्नुपर्ने अवस्था बन्यो । मुगल शासनको बेला मात्रै भारतवर्षभित्र २० करोड भन्दा बढी हिन्दु, बौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बी मारिएको थिए । हजारौं मन्दिर ध्वस्त पारिए । अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बंगलादेशको त धार्मिक रुपरंग नै फेरियो । यसपछि, जे जति रह्यो; तीमध्ये केहिले मुस्लिमपन्थ स्वीकार गरे । केहि भागेर हिन्दु शासकहरु रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्न थाले । अंग्रेजले भारतमाथि साम्राज्य खडा गरेपछि, त्यो पनि ध्वस्त भयो । वैदिक शास्त्रको ज्ञान कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्यो । यो त्यहि कालखण्ड थियो, जतिखेर फ्रान्समा समाजवादी आन्दोलन सुरू भयो । रोमन क्याथोलिक चर्चले आम जीवनमा थोपरेको अत्याचारविरुद्ध अन्य युरोपियन मुलुमा पनि धर्मनिरपेक्षतावादी अवधारणा प्रवल बनिसकेको थियो ।
‘ईश्वर मरिसक्यो’ ‘धर्म अफिमको नशा हो ।’ लगायतका भौतिकवादी विचारहरुप्रति आम मानिस आकर्षित हुन थाले । माक्र्सवादी सिद्धान्त यसै सेरोफेरोमा ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद’ को नयाँ नियम सहित देखा प¥यो । वैदिक शास्त्र अध्ययनको परम्पराबाट हजारौँ वर्ष टाढिएर अंग्रेजी शिक्षा पद्दतिमा रमाउन थालिसकेको हिन्दु समाजका लागि पनि ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद’ को नियम आकर्षक त बन्यो तर युरोपले झैँ अँगालिएन । बाईबलका लागि भौतिकवाद, परमाणु, सृष्टिको उत्पत्ति, विकास तथा विनाश र फेरि सृष्टि उत्पत्तिको सिद्धान्त अपाच्य तथा अधार्मिक हुनसक्ला; सनातनीका लागि शास्त्रसम्मत छ । किनभने, ब्रह्माण्डका प्रत्येक कण कणमा ईश्वर छ भन्ने मान्यता अवैदिक हैन । कण कणमा रहेको त्यही ईश्वरलाई कुनै दिन विज्ञानले पदार्थ नै ठह¥याउँछ भने पनि यो वेदसम्मत नै हुनेछ किनभने प्रकृतिसँगसँगै वेदको नजरमा ईश्वर र आत्मा पनि पदार्थ नै हुन् ।
दुःखको कुरा, डा.भट्टराई जस्ता विद्वान, भौतिकवादको समेत जननी रहेको हिन्दु धर्मविज्ञान विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुमै रूची राख्छन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई नै अन्तिम सत्य ठान्छन् । जबकि, वेदादि शास्त्रहरुको गहन अध्ययन कै लागि यतिखेर जर्मनी तथा अमेरिका जस्ता मुलुकमा वैदिक फाउन्डेसन तथा संस्कृत भाषा अध्ययन केन्द्र खुलेका छन् । क्वान्टम फिजिक्सका अध्येताहरू, ‘जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य’ भन्दै वैदिक खोजमा केन्द्रित भएका छन् ।
प्रकाशित १६ असाढ २0७५ , शनिबार | 2018-06-30 03:37:30